AbaChongi abaPhezulu ngu-Ian Ayres | Martech Zone
AbaChongi abaPhezulu ngu-Ian Ayres
NgeCawa, ngo-Epreli 19, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abafundi rhoqo bebhlog yam bayazi ukuba bendihlala ndingu Ummeli wemilinganiselo. Umsebenzi wokuthengisa kwindawo yogcino lwedatha uvule amehlo am kumandla edatha kunye nokukwazi kwayo ukunceda ngokuchanekileyo iinzame zentengiso. Ukuzimasa Ingqungquthela yeWebtrends Engama-2009 yayikhuthazo kwaye indibeke kwi-crusade yokuqinisekisa ukuba iinkampani zilinganisa kwaye zihlalutye iindlela zazo zokuthengisa kwi-Intanethi.
Indawo yeWebhu wamenywa UIan Ayres ukuthetha ngencwadi yakhe, Super Crunchers. Ndafumana incwadi enomfanekiso omninzi kuloo msitho ndaza ndaqala ukuyifunda kwinqwelomoya. Ndikhe ndanzima ukuyibeka phantsi ukusukela!
Ndicinga ukuba umxholo wencwadi yonke unokushwankathelwa ngesivakalisi esinye:
Sibona umzabalazo we-intuition, amava akho, kunye nefilosofi yokuthanda ukulwa nemikhosi yamanani angenangqondo.
I-Ayres ibonelela ngemizekelo emibalabala evela kumayeza ohlukeneyo, urhulumente, imfundo, imboni yeemovie… kunye nokukhethwa kwewayini ... Yonke imizekelo iyayixhasa into yokuba ukuqokelelwa kwedatha kunye nohlalutyo olubanzi (ngokujolisa ngokukodwa kuhlalutyo lokubuyela umva) kunokusinika ulwazi lokuphucula kunye nokuqikelela iziphumo zeshishini.
Nokuba awungowokuthanda uhlalutyo, le yincwadi enkulu kuye nawuphi na usomashishini okanye umthengisi ukuba ayithathe.
Imilinganiselo yeendaba zeNtlalontle kufuneka!
Uhlalutyo + loyilo = Impumelelo yeMidiya yoLuntu
Epreli 21, 2009 ngo-9: 23 PM
Ndiphakathi kule ncwadi ngokwam. Ufile ulungile kwaye unethamsanqa lokuba umve ethetha. Ndisebenzisa izimvo ukukhuthaza iindlela ezingcono zokwenza umsebenzi wabasebenzi (cinga ukuthengisa ngaphakathi "kwiimveliso" zembuyekezo kunye nezibonelelo.
Enkosi ngeposi enkulu.
Epreli 21, 2009 ngo-11: 58 PM
Enkosi iBhili! Ukukuxelela inyani, ndiyonwabele le ncwadi ngaphezu kwale ntetho! Ndicinga ukuba ukulambela kwakhe uhlalutyo lwedatha kubonakala ngakumbi ekubhaleni kukaMnu Ayres.